VLC yeIOS inowedzerazve kuenderana neiyo AC-3 codec | IPhone nhau
VLC yeIOS inodzorera kuenderana neAC-3 codec
Nhau dzandiri kuzokupa nhasi hadzina kugadzirwa maawa mashoma apfuura, asi ini ndinofunga zvaive zvakakodzera kuzviburitsa. Icho chiitiko cheApp Store chishandiso asi, kwandiri, haisi imwezve yekuvandudza yeyakajairika kunyorera. Zvakare, iyo yekuvandudza haina kusanganisira runyorwa rurefu rwekuchinja, asi chimwe chezvinhu zvitsva zvinoita iyo VLC, iko kunyorera kuri mubvunzo, zvakare zvakare imwe yeakanakisa, kana asiri iwo akanakisa, emahara midhiya mutambi muApp Store.
Yakanga iri Chitatu yapfuura iyo yechigumi neimwe pandakaona iyi yekuvandudza asi kusvika nhasi ndanga ndisina kuwana nguva yekuiburitsa. Nhau hombe ipfungwa yechipiri pane runyorwa rwemashoko matinoverenga «Wakawedzera rutsigiro rwe AC-3 uye E-AC-3 pane iOS 9.3 kana gare gare», Maviri emakodhekisi avakabvisa nguva pfupi vachidzokera kuApp Store uye izvo zvakaita kuti vashandisi vazhinji vawane dzimwe nzira dzatisingade sekufarirwa neVideoLAN.
VLC inoita rugare ne AC-3
Dambudziko nemutambi wechimiro cheVLC ndechekuti kusavapo kwemakodhi kunoita kuti irasikirwe nenhamba dzakawanda. Mazhinji emavhidhiyo atinogona kudhawunirodha paInternet anoshandisa AC-3 odhiyo codec uye hatizokwanisa kunzwa kurira kwavo kana tikasatamba mumutambo unosanganisira rutsigiro. Ndo zvakaitika kuVLC yeIOS kare kare zvekuti handizive kuti zvaive riini, asi ndinozvirangarira vakarega kupa rutsigiro kubva pakuvandudzwa kwekupedzisira, nguva pfupi vachidzoka kuApp Store vachiteerera nemitemo yayo mitsva, kuvandurudzo yavakaburitsa svondo rino.
Saka ikozvino unoziva. Kana iwe uchitsvaga yakavimbiswa vhidhiyo uye odhiyo mutambi iri zvakare vakasununguka, Ndinofunga kuti VLC yave zvakare sarudzo yakanakisa muApp Store, chinzvimbo icho chaisafanirwa kunge chakasiya, asi icho chakasiya nekuda kwenyaya dzerezinesi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » VLC yeIOS inodzorera kuenderana neAC-3 codec
Chimwe chinhu chakaitika ku AC3 nekuti GoodPlayer yakawanazve rutsigiro rwe AC3, chimwe chinhu chavakarasa makore akati wandei apfuura. Ndinofunga paive nerumwe rudzi rwechinetso ne € € €
Chero zvazvingaitika, sezvo ini ndachinjira kuInfuse, vashoma vatambi vanoita kunge vanosvika padyo nehunhu hwavo.
Mhoro, Alfonsico. Izvo zvakangoitika kwauri seni, asi mune yangu kesi ndakatenga iyo Pro yeApple TV. NeInfuse ndinogona kutarisa chero mhando yevhidhiyo, kunyangwe iya yandinayo paTC. Asi ini ndinotaura pane izvi nekuti ndezvemahara uye ikozvino zvinoshanda nemazvo, izvozvi zvawanazve AC3.
Enrique Romagosa akadaro
Kwapera nguva, ndakaenda kunopa uye zero matambudziko, chirongwa chakanakisa chekutamba chandakaedza pane apple TV, zvakakodzera kuribhadhara uye kukanganwa nezvematambudziko
Pindura Enrique Romagosa
Iyo iOS 9.3 iyo AC3 inotsigira, uye zvirokwazvo Apple ichaibhadhara.
Saka zvishoma nezvishoma vatambi vese vari kuvandudzwa kuti vashandise AC3 zvakare.
Ini ndinoshandisa OPlayer, uye yakagadziridzwa mavhiki mashoma apfuura.
Inowedzera rutsigiro rwekutamba vhidhiyo yakanyorwa neDolby Digital Plus hova dzinoteerera nerutsigiro rwe multichannel kuburitsa uchishandisa Apple Mheni Dhijitari AV Adapter.
Mhoro, unoziva kana ivo vakaisawo mune yeApple TV vhezheni?
Pindura kuna jankoesp
Mhoro. Ehe, iyo yakafanana gadziriso yaburitswa yeApple TV.
Ndatenda kwazvo Pablo, ini ndangozviedza pane yangu Apple TV uye yakakwana 🙂
Ini ndichangobva kurodha vlc uye inondiudza «codec haina kutsigirwa vlc coul kwete kudhiza fomati« a52 ″ (a52 odhiyo (aka ac3)) »
King Tsuro ndiwo wakasununguka mutambo wevhiki paApp Store